Wasiirka Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya oo ka qeyb-gashay shirweyne caalami ah | Dayniile.com
Home Warkii Wasiirka Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya oo ka qeyb-gashay shirweyne caalami ah
Home WARARKA Wasiir Fawziya oo ka qeyb-gashay shirweyne caalami ah
Wasiir Fawziya oo ka qeyb-gashay shirweyne caalami ah
MUQDISHO (SMN) – Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka, Agaasimaha Guud, la taliyeyaal iyo Madax kale ayaa hanaanka fogaan aragga kaga qaybgalaya maalintii 3aad kalfadhiga 68aad ee (RC68 Regional Committee for the Eastern Mediterranean countries).
Sidoo kale Wasiirada ayaa ka hadashay baahida Soomaaliya ay u qabto maalgelinta iyo dib udhiska nidaam caafimaad oo adkeysi u leh bixinta adeegyada Caafimaadka Assaasiga ah xiliyada xaaladaha deg-dega ah lagu jiro ee ay kacsanyihiin dhibaatooyinka iyo xasaradah.
Previous articleWasiirka Arimaha Dibadda Turkiga oo wacad ku maray inuu Jawaab adeg bixinayo, kadib weeraro lagu qaaday
Next articleMaxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada ee Jubbaland?
waxaa goor dhawayd magaalada Addis Ababab gaaray Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo Wafdi uu Hogaaminayo. Wararka ayaa sheegaya in Farmaajo garoonka...